ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးကတိကဝတ် • Apricots®
ပြည့်တန်ဆာကျင့်ဝတ်လိင်ကဏ္ဍလစာအတွက်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ရိုးသားအလေ့အထများမြှင့်တင်ရန်, apricot တှငျမှေးဖှားတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ / အလုပျသမား / လိင်မိတ်ဖက်များ၏အခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါဟာလိင်ကဏ္ဍ postpay တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အများအပြားသရုပ်ဆောင်များကိုဆွဲယူသောမှေးမှိန်လာစီးနှင့်ပုန်ကန်ထဲကရရန်ဖြစ်ပါသည်။
မီဒီယာအစဉ်အမြဲပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့်တိကျစွာပြည့်တန်ဆာလောကီသားတို့သည်အကိုရှင်းပြနိုင်စွမ်းမရှိကြပေ။ တကယ်တော့, တစ်ခါတစ်ရံအဖြစ်မှန်အတွက်အမှုအရာသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအခါပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း, ပြောရလျှင်ကြောင်းကိုပုံရသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, apricot ကတည်းကကျနော်တို့ကဒီကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်သောအများအပြားသဘောတရားများကိုရှင်းလင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရတယ်, ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဟာကိုပြင်ဆင် နှင့်မှားယွင်း၏ infographic အဲဒီမှာခဝါသည်နှင့်ထွန်းလင်း။ ဒါ့အပြင်ကတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်၏။
ထို့ပြင်အစဉ်ထက် ပို. ယနေ့အင်တာနက်ကယခုယနေ့သောအရာကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မီဒီယာ, ပုရုတ်တရက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်,5မိနစ်သမိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာသတင်းအချက်အလက်နှိုငျးယှဉျဖို့အချိန်အကြီးအကျယ်လျှော့ချကြောင်းဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်ကိန်းဂဏန်းပေးထားကြသည်အထူးသဖြင့်အခါ, အမှားတွေသို့မဟုတ်တိစေရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ထိုအခါ မှားကိန်းဂဏန်းများ အများကြီးပြည့်တန်ဆာအဖြစ်အခြေအတင်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာန်းကျင်ထုတ်လုပ်ပြီးတစ်ဘုံအလေ့အကျင့်ဖြစ်ကြ၏။ ဤအကြောင်းကြောင့်, apricot ကတည်းကများနှင့်အပေါ် အဆိုပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တန်ဆာ '' နေ့အခါသမယကျနော်တို့ကလိုအပ်သောခဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် မှ ပေးဆောင်လိင်ကဏ္ဍ၏သဘောတရားများကိုပတ်ဝန်းကျင်ရှင်းလင်း။ ကျနော်တို့မီဒီယာကျနော်တို့ကြိုးစားရန်လိုအစီရင်ခံ၏လုပျငနျးအတွက်မကူညီကြဘူးအဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများရှိကွောငျးသဘောပေါက်ပါ။ တစ်ဦးက puticlub, လေ့ကဆိုသည်။
ပထမဦးဆုံးအရာကြောင့်စပိန်သူ့ဟာသူအတွက်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းအပေါ်အဘယ်သူမျှမပြည့်စုံလေ့လာမှုရှိကွောငျးဖျောပွဖို့ကအရေးကြီးတယ်, အဆိုပါသုတေသနမဟုတ်ဘဲလူကုန်ကူးမှု, ခေါင်းပုံဖြတ်, အကြမ်းဖက်မှု, ဂိုဏ်း, etc စကားပြောနှင့်ကြည့်ရှုရန်သင့်မျက်စိဖွင့်လှစ်မယ့်ကိုဒီကဏ္ဍကဖုံးလွှမ်းသောသူအပေါင်းတို့သည်ရှိသည်ဖို့အာရုံစိုက်။ အလားတူဥရောပအဆင့်တွင်ရှိရာမှာသက်ဆိုင်ဥပမာ, ကုလသမဂ္ဂအစီရင်ခံစာ "ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်မှုအတွက်ဥရောပမှပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လူကုန်ကူးမှု လိင်လုပ်သားတွေရဲ့ 15% လူကုန်ကူးမှု၏သားကောင်များဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်း" ။ အမြိုးသမီးမြား၏ 15% ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းသို့အတင်းအဓမ္မလျှင်ဒီတော့ယုတ္တိနည်းကျန်တဲ့ကာလရာခိုင်နှုန်းရှေးခယျြသူအမျိုးသမီးများ၏တက်ထား ရန် ဖြစ်စေသမျှအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ဆန္ဒအလျောက်ဒါလုပ်ပါ။
ကျနော်တို့အထဲကထောက်ပြချင်ခဲ့တယ်နောက်ထပ်ရှုထောင့်ယောက်ျားလည်းပြည့်တန်ဆာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးတွေကြောင်းနှိုင်းယှဉ်တစ်ရယ်စရာရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပေမယ့်လည်း, အဘယ်ကြောင့်ဝှက်ထားသောနိုငျသလဲ မည်သည့်သုတေသနသို့မဟုတ်လေ့လာမှုမှာတော့တစ်နိုင်ငံလုံးသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာတွင်ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်သောလူတို့၏ရာခိုင်နှုန်းသိရှိနိုင်ရန်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အလားတူပင်အဲဒါကိုပိုက်ဆံလဲလှယ်အတွက်၎င်းတို့၏အလောင်းများကိုပူဇော်သောသူသည်လိင်ကလူအပေါ်ဒေတာကိုရှာဖွေမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
လူကုန်ကူးမှုသည်, မာဖီးယားဂိုဏ်းတစ်ဦး (ဝမ်းနည်းဖွယ်) အဖြစ်မှန်, ကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်အသေးစိတ်အရပ်များသောအားဖြင့်ဆန္ဒအလျောက်နှင့်လိုအပ်ကြောင်းအခြားသူတို့ကိုယ်သူတို့မှားယွင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်သူတစ်ဦးလှုံ့ဆျောခေါင်းပုံဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှင်းလင်း။
ကျနော်တို့လူကုန်ကူးမှုနှင့်လိင်ခေါင်းပုံဖြတ်တိုက်ခြင်းနှင့်အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့ကို join ဖို့လိုပါတယ်။ Denounce @ တိတ်ဆိတ်စွာဖြစ်မနေပါနဲ့! အ trata@policia.es လိပ်စာအတွက်အမျိုးသားရဲနှင့်ဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်သင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 900 105 090. မခေါ်!